जित्नकै लागि जन्मने यी राशिहरु, शुरु गरेको काममा सफलता नमिल्दासम्म बस्दैनन् चुप !! | सुदुरपश्चिम खबर
जित्नकै लागि जन्मने यी राशिहरु, शुरु गरेको काममा सफलता नमिल्दासम्म बस्दैनन् चुप !!
सफलता र सुख ज्योतिष शास्त्रलाई मान्ने हो भने जहिले पनि ग्रह स्थितिमा निर्भर हुने गर्छ। ज्योतिष शास्त्रले कुन राशि भएको व्यक्तिको कस्तो व्यवहार हुन्छ भन्ने बारेमा बताउने गर्छ।
मकर राशि हुनेहरुलाई हरेक प्रकारको प्रतिष्ठा–सम्मान, धन–वैभव मिल्ने गर्छ। तर कुनै पनि सफलता आफ्नै प्रयासमा प्राप्त गर्ने क्षमता पनि राख्ने गर्छन।
साथै मकर राशि हुनेहरु प्रभावशाली वक्ता पनि हुन्छन् । जसको कारण अन्य व्यक्तिहरुलाई छिट्टै प्रभाव पार्न सक्छन्। साथै सफलता पाउनको लागि जुनै पनि हदसम्मको दुख गर्ने हुँदा मकर राशि हुनेहरु प्रायः सफल हुने गर्छन्। (नयाँ पुस्ता बाट सभार)
चीनले थप १६ लाख खोप नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने